Lahatsoratra nataon'i Sarah Williams ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Sarah Williams
Nisy fotoana raha hanamboatra azy ianao dia ho avy izy ireo. Saingy izany rehetra izany talohan'ny nahatonga ny internet ho tototry ny atiny sy tabataba be loatra. Raha nahatsiaro ho sorena ianao fa tsy lasa lavitra toa ny taloha intsony ny atiny dia tsy anao izany. Niova fotsiny ny raharaha. Androany, raha mikarakara tsara ny mpihaino anao sy ny orinasanao ianao dia tsy maintsy manamboatra paikady hanosika ny atiny handroso ianao